Womdlalo we-SportStake eNingizimu Afrika | Idlalwa kanjani i-SportsStake 2022 - OnlineCasinosOnline
Ikhaya / isiqondisi se-lotto sase-ningizimu afrika esiku-inthanethi / womdlalo we-sportstake eningizimu afrika | idlalwa kanjani i-sportsstake
Womdlalo we-SportStake eNingizimu Afrika | Idlalwa kanjani i-SportsStake
Idlalwa Kanjani i-Sportstake
Ukudlala umdlalo weSportStake, kufanele uqagele kahle imiphumela yochungechunge lwemidlalo yebhola. Imvamisa, abadlali beSportstake kuzofanela baqagele kahle imiphumela yemidlalo eyishumi nambili echazwe ngaphambilini ethathwe eNingizimu Afrika, e-UK nakwezinye izindawo ezikhethiwe zebhola likanobhutshuzwayo.
Qaphela ukuthi izincazelo zizohluka ngokuya ngokuthi umdlalo uyi (1), (X), noma (2) uhlobo lomdlalo.
Umdlalo (1) uwukuwina ekhaya, okusho ukuthi uqagela ukuthi iqembu eliqaphele kuqala ohlwini lwemidlalo lizowina umdlalo othile.
Umdlalo we-A (X) ungowokudlala ngokulingana, okusho ukuthi uqagela ukuthi amaqembu womabili azoqeda ngokuthola amaphuzu afanayo kulo mdlalo othile.
Umdlalo (2) ukunqoba kude, okusho ukuthi uqagela ukuthi iqembu eliphawulwe ekugcineni ohlwini lwemidlalo lizowina umdlalo othile.
Kuthiwani uma i-Fixture ishiywe noma ikhanselwe?
Uma umdlalo ushiywe, ukhanseliwe, noma uqala ngaphambi kokuphela kokuthengisa njengoba kushicilelwe, konke ukubheja kwesibikezelo salowo mcimbi we-SportStake kuzothathwa njengesibikezelo esifanele. Imiphumela ye-Fixture izokhonjiswa nge-‘C ‘ngomdlalo okhanseliwe, i-‘E’ yokulungiselela kokuqala noma i-‘F ‘yabo bobabili. Ukubheja ngakunye okune-1 yalezi zinhlamvu eceleni kwayo kuzothathwa njengokubheja okuwinile.
Ungathenga amathikithi eSportstake kunoma iyiphi indawo ye-Lottery ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu phakathi kwamahora we-6: 00 AM no-11: 00 PM. Amathikithi abuye athengiswe ngoMgqibelo phakathi kwamahora we-6: 00 AM kuze kube isigamu sehora ngaphambi kwesikhathi sokuqala somdlalo esimenyezelwe.
Qaphela: Uhlu ngalunye lwemidlalo luzoba nohlu lwemidlalo eyishumi nambili. Amaqembu abamba iqhaza kulungiselelo azofakwa kuhlu njengengxenye yeqembu lasekhaya noma iqembu elivakashelayo. Iqembu elishiwo kuqala liyohlale liyiqembu lasekhaya, kanti iqembu lesibili kuzoba yiqembu elivakashile.
Isikhwama semiklomelo seSportStake siqukethe amaphesenti angamashumi amahlanu entengo isiyonke yokuthengisa. U-Division one uzothola u-35%, owesibili uzothola u-20% kuthi owe-3 athole u-45%. IJackpot izoba ne-rollover uma kungekho noyedwa ozuza umklomelo.